Ny fomba fanadiovana ny vata gorodona ihany koa dia marevaka: toro-hevitra fanadiovana isan'andro - ZD manam-pahaizana zoro
Home > Ny fomba fanadiovana ny vata gorodona ihany koa dia marevaka: toro-hevitra fanadiovana isan'andro
1. Ahoana no hamoahana disinfect ho fanamboarana ny tsenan'ny gorodona? Voalohany, amboary ny fitaovana ho an'ny otrikaretina ratsy.Manana ny zava-dehibe, misy ny sponjy, ny manondrahana ny masinina, ny fanadiovana ary ny fanadiovana fitaovana mifanaraka amin'ny tasy eo amin'ny tsipika.
2. Alohan'ny handatsahan-tany dia alao amin'ny rano aloha ny fampisotroana rano ary hamafina takelaka lehibe mitovy amin'ny gorodona. Rehefa avy manaparitaka rano ianao, apetaho ny sponjy handroina ny olona rehetra, ahetsiketsika ny rano avy amin'ny rano, ary avereno avy eo ny gorodona amin'ny gorodona gorodona voatondraka amin'ny rano. Satria nofafazana rano ny tany, dia sarotra be ny manala ny tany, ka vetivety foana rehefa notaritarihina, satria efa tondraka vetivety tao anaty tany ny rano dia nanjary sarotra be ny nanala azy io.
3. Ho an'ny menaka voafaritra manokana dia hamafy rano fanadiovana manokana ary avelao hijanona mandritra ny dimy minitra. Avy eo, mampiasà lamba (lamba famaohana) malefaka na manosihosy azy. Raha ny safidin'ny bibikely tsy mifototra dia miankina amin'ny karazana fatana eo amin'ny velaran'ny biriky.Mety afaka misafidy arakaraka ny toe-javatra eo ambony.
4. Voatsoboka ary diovina ny tasy.Afika ny fisintonana ny zavatra rehetra dia ho madio tsara ny pap dia amin'izao fotoana izao, dia tokony hosasana ireo zavatra madio eo an-dohan'ilay paosy ary hamafazo. Ity koa misy tendron-tsoa lehibe ho an'ny rehetra.Raha misy kitapo fanasana ao an-tranonao dia azonao atao ny mametraka azy ao anaty koveta lehibe ary mandrotsaka rano, ahafahanao mandrotsaka ny lohan'ny mop. Milomano miverina eo amin'ny solaitrabe, hodiovina ny lohan'ny sponjy mop dia hodiovina tsy ho ela, ary ho mora sy mety.
5. aorian'ny fanadiovana ny paty dia hamafaina hanina ny rano ny sponjy, ary avy eo dia mandehandeha haingana amin'ny tany aorian'ny fantsakana, hitrandraka ilay rano tsy ilaina amin'ny tany, ary tsy handetotra madio Toerana, ario koa amin'ny indray mandeha, ho ratsy dia ratsy ny vokatra!
Ny fomba fanadiovana ny vata gorodona ihany koa dia marevaka: toro-hevitra fanadiovana isan'andro Ny atiny mifandraika